Konsartiin Walloo har'a Finfinneetti gaggeeffamuuf ture maaliif dabarfame? - BBC News Afaan Oromoo
Artist Saaliyaa Saamii Konsartii Orommota Walloo guyyaa har'aatti magaalaa Finfinnee galma barkumeetti gaggeefamuuf qopheessaa turte gara Adoolessa 28tti dabarmafuusaa BBC'tti himte.
Konfaransiin OSA fi dhaabbiin biqiltuu biyyaaleessatiin wal qabatee konsartiin kuni akka dheeratuuf kan eeraman tahuu Artistii Saaliyaan BBC'tti bilbilaan himte jirti.
Sababa sagantichi dheerateen keessummootni Finfinnee galaniifi dhufaa jiran rakkachuu akka dandahan himuunis keessummoota Finfinnee seenaniif deeggarsi akka taasifmus himteetti.
"Sadarka kanarraan kan na gahe jabeenya ishiiti" - Dammaraa Laggasaa
Laga ceene malee, galaanni nu hafa: Ilfinash
Sababa ijoo guyyaan konsartiichaa akka dheereeffamu itti taasifame ilaalchisee gadi fageenya isaa ammaaf himu hinbarbaadu kan jette Saalihaan, gara fuuladuraatti akka Ifa gootus himte jirti.Konsartichi garuu guyyaansaa dheeratus bifa milkaa'een akka raawwatamu abdii guddaan qabas jette.
Kaayyoon Konsartichaa maal ture?
Konsartiin Walloo Oromoota walirraa fagoo jiran walitti fida jetti, Saalihaa Saamii.
Konsartiin walloo sanbata duraa dhufu galma barkumeetti dhihaatu qopheessaa kan jirtu Aristi Saaliyaa Saamii waa'ee konsartichaa ilaalchisuun BBC waliin turtii taasiftee jirti, dubbifadhaa.
BBC- kaayyoon konsartii Walloo maali?
Saaliyaa- Konsartiin walloo kaayyoonsaa jalqabaa Oromoota walirraa fagoo jiran bakka tokkotti walitti fiduudha. Inni biraan Qabsoo waggaa shanan darbanii Kanaan lammiileen keenya walloo kan miidhamanii, Kan mannifaan jalaa gubatetu jira.
Image copyright Oromp3
Lola deemaa jiran kanarratti ijoolleen baayyeen miidhamanii hospitaala kan jiranis jiru. Maatiin ijoolleen isaanii jalaa wareegamanis baayyeetu jira. Isaan hunda gargaaruu barbaanna jechuudha.
Gama biraatiin uummata walloo kana handhuura Oromiyaa Finfinneetti affeerree Oromoota kutaa biraa jiran waliin walargisiisuus ani akka waan guddaa tokkoottin ilaala.
Uummanni Oromoos waan kana itti gammada jedheen yaada. Uummanni walloo ammo nucaalaa fedhiisaanii akka ta'e waliin dubbii taasisaa turerraa hubadheera.
Kanaafuu Oromoonni Walloo Finfinnee dhufanii hamilee walii kennuu qabna. Namni nu jibbullee waan kana arguu qaba.
BBC- Konsartichi sagantaalee akkamii ofkeessaa qaba?
Saaliyaa- konsartii kanarratti aartistoota hedduu, warren koomeedii hojjetan, hawwisoofi baandiin walloorraa dhufanilleen nijiru.
Sabaafi sablammootarraallee warri hojii isaanii dhiheessan ni jiru. Kana hunda dhiheessinee oromoon walbaree, saboonni biroollee akka nubaran, eenyu akka taane mul'isuu fi warra nujaalatan fuulduraafis tumsa godhachuufi.
BBC- Saba biraarraa konsartii kanaaf kanneen Finfinnee dhufanii qophaahaa turan nijiruu?
Saaliyaa - Eeyyee warri akka Qimaanti, Agawu,Awwii,saqoxaa, Affaar fa'aatu qophaa'aa jira konsartii kanaaf. Isan kuni hundi isaanii warra nuti Kuushi jedhee amanudha. Saboota cunqurfamaa bahan keessaallee tokkodha warri kuni.
Humna Oromoo nibeekan.fuuladuraafillee kan garaa bal'atee saba cunqurfameef dhaabbatu Oromoo ta'uu hubatanii nuti isin waliin jirra, isin malees qofaa keenya jiraachuun hiika nuuf hin qabu kanaaf waan hundaan walbira dhaabbanna warra jedhanii dhufanidha.
Saboota dhufan kana keessatti artistoota jaalatamaniifi dhiibbaa uumuu dandahantu konsartii kanarratti hirmaachuuf qophaa'aa jira.Saba isaanii kan hubannoo hin qabneefillee warra hubannoo gaarii uumuu dandahan ofkeessatti hammannee jirra.
BBC- Galiin Konsartii kanarraa argamu guutumatti uummata wallootif oolaa?
Saaliyaa- Eeyyee. Nama hedduutu argama jennees eegaa jirra.
Konsartiin kuni akka hin milkoofneef saba biraa keessaa kan numormuu barbaadanis numuudachaa jira. Warri Oromoo jibbu kan waan kanarratti waldhibaa turret jira. Garuu moo'annee jirra.
Qabsoo cimaa keessa darbaa sadarkaa kana geenye, warra humna qabantu nugargaareeti. Mootummaan naannoo oromiyaas nugargaaraa jira.
BBC- Konsartii Walloo kanarratti walloorraa uummatni ni dhufaa?
Saaliyaa- Eeyyee. Namoota hedduu waamnee jirra. Warri baandii walloos jiru. ​Akka uummataattis walloorraa nama baayyeetu Finfinnee seenaa jira.
BBC- Konsartii kana qopheessuurratti wantoonni gufuu sitti tahan maali?
Saaliyaa- Galmi itti qopheessaa jirru kan Oromootii miti. Lafatu kan Oromooti.
Achirrratti nudura dhaabbachuuf yaalanii turan. Garuu seeraan waraqaallee heyyama hunda waan qabnuuf sanumaan irra aanne. Amma wanti hunduu haala gaariin deemaa jira.
BBC- konsartii kee kanaaf Oromoorraa maal eegda?
Saaliyaa- walgargaarruun mana waliif ijaaruu qofa miti. Maallaqa walii kennuu qofas miti.
Wanti Oromoon walgargaaruu qabu tokkummaa uumuufi walcinaa dhaabbachuu irratti ammallee waan hedduun waan nu hafuuf ormi heddumina keenya, cimina keenya arguu qaba.
Amma asgeenyeerra waan hundi dhumate jennee taa'uu hin qabnu. Walcinaa dhaabbachuufi waldhagahaa haa deemnun jedha.
BBC- ati yeroo hedduu Oromoota Walloofi Raayyaa irratti yoo xiyyeefattu filatta. Kuni maalirraa madde?
Saaliyaa- seenaa isaanirraayi kan nakakaase. Akkaataan isaan itti jiraatanuu naannoo biraa keessa. Warra walloofi Raayyaa kana walumaan gabrummaa keessa waliin turrullee, kansaaniimmoo keenyarraa adda.
Kanaafuu Oromoota kana sadarkaa Oromoon kutaa Oromiyaa keessa jiraatu gaheerraan gahuu qabna jedheen isaanirratti xiyyeefadha malee anaaf Oromoon hunduu qixuma.
Galgala kana oduun guyyaan konsartichaa sababa galmi qabameef adoolessa 28titti darbe jedhu nijira. Ganama bilbileefii qulqulleefadheen booda haa bahu.